Isaya 31 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Rubatsiro chairwo runobva kuna Mwari, kwete kuvanhu (1-9)
Mabhiza eIjipiti ndeenyama (3)
31 Vane nhamo vaya vanodzika kuIjipiti kuti vanobatsirwa,+Vanovimba nemabhiza,+Vanovimba nengoro dzehondo nekuti izhinji,Uye nemabhiza ehondo nekuti ane* simba. Asi havatarisi kuMutsvene waIsraeri,Uye havatsvagi Jehovha. 2 Asi iye akachenjerawo uye achaunza dambudziko,Uye haazochinji zvaataura. Acharwisa imba yevanoita zvakaipaUye vaya vanobatsira vanoita zvisina kururama.+ 3 Zvisinei, vaIjipiti vanhu venyama uye havasi Mwari;Mabhiza avo ndeenyama kwete mweya.+ Jehovha paachatambanudza ruoko rwake,Wese anopa rubatsiro achagumburwaUye wese anobatsirwa achawa;Vese vachaparara panguva imwe chete. 4 Nekuti Jehovha ati kwandiri: “Sekuhon’a kunoita shumba, shumba ine simba,* ichihon’era mhuka yayabata,Panoshevedzwa boka rese revafudzi kuti vazoirwisa,Iyo isingatyi inzwi ravoKana kutyiswa nemheremhere yavo,Saizvozvowo Jehovha wemauto achaburukaKuzorwira Gomo reZiyoni nechikomo charo. 5 Seshiri dziri kuyangarara mudenga, Jehovha wemauto achadzivirirawo Jerusarema.+ Acharidzivirira, oriponesa. Acharichengetedza, orinunura.” 6 “Dzokerai kuna iye wamakapandukira musina kana nyadzi, haiwa imi vanhu veIsraeri.+ 7 Nekuti zuva iroro mumwe nemumwe acharamba vanamwari vake vesirivha vasina zvavanobatsira navanamwari vake vegoridhe vasina maturo, vakagadzirwa nemaoko enyu muchiita chivi. 8 MuAsiriya achaurayiwa nebakatwa, kwete remunhu;Uye achaparadzwa nebakatwa risiri remunhu.+ Achatiza bakatwa,Uye majaya ake achaitiswa basa rekumanikidzwa. 9 Dombo rake richaparara nemhaka yekutya kukuru,Uye machinda ake achabvunda nekutya bango rechiratidzo,” ndizvo zvinotaurwa naJehovha,Uyo ane chiedza chiri* muZiyoni uye ane choto chiri muJerusarema.
^ Kana kuti “nevatasvi vemabhiza nekuti vane.”
^ Kana kuti “moto uri.”